I-FAQs-iShang Gianty yokuThengisa Co, Ltd.
1.Yintoni umxholo wakho odityaniswa ngokugqibeleleyo? Ngaba le nto ikhuselekile？
Yinto biopolymer eyenziwe ngepolylactic acid (PLA) enokufumaneka kwizityalo ezinesitatshi njengombona, iitapile kunye nomoba. Ezi zixhobo zeBPA zasimahla kwaye i-FDA ivunyelwe kukhuseleko lokutya. Inani eliqinisekisiweyo lokuqina kunye nokukhuseleka linokubonelelwa.
2. Kutheni iimveliso zePLA zizinzile?
I-PLA yenziwa kwisityalo esinokuhlaziywa minyaka le. Iimveliso ze-PLA zinokufakwa ngokupheleleyo ngamacwecwe okuthengisa umgquba. Nangona kunjalo, banakho ukulahlwa zezinye iindlela zokulawulwa kwenkunkuma ngokwesiko njengokugcwaliswa komhlaba.
3. Ndingayifaka imveliso yakho kwi-compost esemva kwezindlu?
Sicebisa ukuba kulahlwe iimveliso zePLA kwindawo yomgquba wamashishini apho ziya kuthi zijikwe zibe ngumgquba zize zijike emhlabeni. Ayikukhuthazwanga ukuba isetyenziswe kwi-compost yokubiya ngasemva komgangatho ngenxa yokunqongophala kobushushu obuphezulu kunye neemeko zokufuma ezihambelana rhoqo.
4. Ungangqina njani ukuba iimveliso zakho zinokuma ngokugqibeleleyo?
Izinto zethu ezinokubanjwa ziyahlangabezana nemigangatho ye-ASTM yokuqina. Baqinisekisiwe ukuba bayazifezekisa ezi nqanaba liZiko leeMveliso zeBiodegradable (BPI) elisebenzisa imigangatho esekwe kwisayensi ukumisela ukuba imveliso iyakwazi na ukwenzeka kwindawo yentengiso. Iimveliso azinakuba ne-BPI logo ngaphandle kokuba iqinisekisiwe ngokusemthethweni. Ke jonga amagama athi "BPI Certified" kwaye unokuqiniseka ukuba imveliso yakho iyakuwela kwindawo yentengiso.
5. Ngaba imveliso yakho ilungele ukusetyenziswa kwendawo yokutyela?
Ewe. Iimveliso zethu zeCPLA zenziwe ngoxanduva olunzima kunye nokunyamezelana nobushushu obuphezulu. Umzekelo, ukusikwa kwethu kuvumela ukusika ukutya okunzima okufana nenyama okanye ukukhenkceza i-ice cream.
6. Ngaba sifeza okuthile xa iimveliso ezigqibeleleyo zinokuphelisa umhlaba.
Ewe. Izibonelelo zokusebenzisa izixhobo ezisekwe ngokupheleleyo kwiziseko zezityalo ziyinyani nokuba awukwazi ukuzenza compost ngumboniso wentengiso. Ezi zibonelelo, xa kuthelekiswa neplastiki yemveli, zibandakanya ukuthoba igesi eluhlaza kunye nokunciphisa ukusetyenziswa kwemithombo yamandla kwindlela ezenziwe ngayo.
7. Ngaba iimveliso zakho zenziwe ngokwezifiso ngexesha elifutshane?
Ewe. Isampulu yovavanyo oluqhelekileyo luhlala luphuma malunga neentsuku ezi-6. Ngenxa yokuba sinomzi-mveliso wakho wokubumba, uyilo lobumba kunye nokwenziwa komngundo kuthatha kuphela iintsuku ezingama-35.
8. Ungayithatha njani inxaxheba kwintsebenziswano yokusebenzisana neGianty?
Ukuba unomdla kuzo naziphi na iimveliso ezivela eGianty, sonwabile ukubonelela ngemodeli yeshishini enokubakho kunye nesisombululo sokuthengwa kwezinto zethu. Umzekelo, i-BIONEO yethu ephawuzwe iipakethe zentengiso kunye nokusetwa kokuphinda kusetyenziswe isidlo sangokuhlwa konke kufanelekile kwishishini lokuqalisa nge-E.
9. Ngaba kukho ukhetho olukhawulezayo lokuhamba kumazwe aseYurophu?
Ewe. I-Hunan-Europe Railway International, indlela engu-10000-km-plus ye-reli ehamba ukusuka kumzi-mveliso waseHunan ukuya eYurophu. Ukuhamba ngale ndlela kaloliwe intsha, kuthatha kuphela malunga neentsuku ezili-10,5 ukuya kwi-avareji ukuthutha izitya ezivela eHunan China ukuya kumazwe aseYurophu, ngaphezulu kweentsuku ezingama-20 ezimfutshane kunokuhambisa ngenqanawa ukusuka kumazibuko aseTshayina aseMpuma.
10. Ngaba akhona amathuba okuxabisa okanye sokutyala iGianty?
Ewe. Sivuleke ngokubanzi ukufumana izibonelelo zotyalo mali ezivela kuwo nawaphi na amahlakani anokubakho kumazwe aphesheya. Sizibophelele ekutsaleni abathathi-nxaxheba abaninzi kumzi mveliso we-eco-friendly table.